Sida loogu dhex daro ogeysiisyada Pidgin ogeysiisyada KDE | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan raadinaayay waqti dheer inaan dhexgaliyo ogeysiisyada Pidgin en KDE, waana ku mahadsan tahay Gespadas Xal baan u helay.
Way fududahay, kaliya waa inaan soo degsano feyl Perl ah oo lagu marti galiyo Koodh Google, laakiin kuwa aniga ila mid ah ayaa goobta laga xiray, waad ka soo dejisan kartaa halkan:
Soo Degso ogeysiisyada-0.3.6.pl
Markaad soo dejiso waxa aan sameyno waa nuqul galka ~ / .purple / plugins / iyo haddii galka uusan ahayn, waan abuureynaa.
Haddaan haysanno Pidgin fur waan xirnaa marki aan furona waan fureynaa Qalabka qalabka waana calaamadeynaa Ogeysiiska KDE.
Waanu ku habeyn karnaa nooca ogeysiisyada aan dooneyno inaan helno, isla markaana laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya waxaan heli doonnaa wax kasta oo lagu daro ogeysiisyada KDE:
Cusboonaysii: Waxaan ilaaway inaan idhaahdo qoraalkani sidoo kale wuu la shaqeeyaa ogeysiin-dir kombuyuutarrada loo yaqaan 'Gtk desktops'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo dhexgeliyo ogeysiiska Pidgin ogeysiisyada KDE
Khaladka Server-ka Gudaha. Ma soo dejin karo faylka xD
WTF? Aan arko haddii ay tahay kordhinta darteed.
Runtii taasi way ahayd. Horaa loo saxay.
Maxaad u hadlaysaa oo keliya Pidgin, Weligaa keligaa? : - /
Hahahaha… Kaliya waxaan haystaa Bonjour PC-ga kale ee aan u isticmaalo iyo tijaabada, si fiican ayaan bilaabay inaan kaligey lahadlo .. Wax duug ah oo bidaar leh .. Waa inaad ogaataa cadaabta. xDD
Waad ku salaaman tahay KDE waxaad leedahay mawduucan, waa wax qurux badan fadlan isii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca si aan u arko haddii aan u wareego KDE
Che, miyaadan isku dayin inaad isticmaasho Telepathy? 0.6.2-ka ayaa si fiican u socda mooooi waxaadna ku xirmi kartaa maamulo badan. (Waana qayb ka mid ah KDE sidaa darteed waxay leedahay is-dhexgal ugu sarreeya desktop-ka ^ _ ^)
1. Raali noqo jaahilnimadayda, laakiin maxaa Code Google loo xiray?
2. Mawduuc noocee ah ayaa loo isticmaalaa Plasma? astaamahaas ayaa u muuqda kuwo qurux badan 😮
Cuba ... taasi waa sababta.
1- Dhimashada juqraafi ahaan.
2- Mawduuca Plasma ee aan adeegsanayo waa… taratataaaannnnn… sidoo kale Hawo, midka sida caadiga ah ku yimaada KDE 4.10, taas oo dhacda in astaamaha aan ku haysto saxaaradda ay ka yimaadeen mowduuca Helium plasma.
1. Waxay ahayd inaan qiyaaso.
2. Waxay u muuqdaan kuwo aad uga duwan waqtigii iigu dambeeyay ee aan iskudayay dulucda. Waan cusbooneysiin doonaa, aan aragno sida 😀
Haa, dhab ahaantii Hawada 4.10 aad ayey uga qurux badan tahay qeybaha kale.
Hagaag, waxaan ula jeeday arinta Helium, laakiin gebi ahaanba waan kugu raacsanahay, Hawada way ka fiicantahay sidii hore.
Wax fiican oo aad awood u laheyd inaad rakibto gunti-guntinta! Sida gunno ahaan, kuwa isticmaala ArchLinux, kaliya waa inay ku rakibaan xirmada pidgin-knotifications-ka AUR.
Haa waa sax. Ma aanan dhigin maxaa yeelay maadaama aanan isticmaalin Arch, ma aanan dooneynin inaan dhigo xog qaldan. Mahadsanid.
mahadsanid mr gespadas
Sababtoo ah haddii ay isticmaalaan KDE ma isticmaalaan barnaamijyadooda hooyo, taasi waa: Kopete, Kmail, iwm.
Waxaan ka fiirsanayaa tijaabinta neefta leh KDE waxaanan xiiseynayaa jawaabtaada tan iyo markii aan la joogay Red Hat oo leh KDE laanta 2.x (haddii aan ahay dinosaur, ha ha) ama slackware oo leh laanta 3.x ma isticmaalo, laakiin waxaan u maleynayaa in heestu isku mid tahay waxaan isticmaali lahaa gudiga KDE iyo wax kale oo leh barnaamijyada gtk badankood ...
Hagaag, shaqsiyan, uma baran inaan isticmaalo wax adeegyo wada sheekeysi ah, laakiin inkasta oo aan aad u jeclahay KDE / Qt, waa inaan qiraa in Kopete, oo ah "halyeeyga" markay tahay MI-da K, inuu yahay mid gaboobay. "KDE IM Contacts", oo ah tan cusub, inkasta oo rajo laga qabo, wali waa la la'yahay. Marka adeegsiga Pidgin meelaha aan Gtk ahayn waa xaq.
Waad ku mahadsantahay jawaabta,
Oo waxaan u maleynayaa in inta soo hartay ay isku mid yihiin taas oo ah, haddii aan isku dayo kheekh leh 'KDE', waa inaan adeegsadaa: Firefox, Thunderbird, Libre Office, Gimp, Synaptic, iwm.
Muusikada muusiga 'MOC' (halkaas waxaad ku isticmaali kartaa Yakuake, xD.).
iyo QT waxaan u isticmaali lahaa ...: VLC.
Runtii waxaan isticmaalaa:
- Muuqaal la'aan
Laakiin maaha Thunderbird, maxaa yeelay KMail waxay u shaqaysaa sidii soo jiidasho.
Waad ku mahadsan tahay jawaabta elav,
Waxaa laga yaabaa in iskuday kheekh leh KDE, xogtu way fiicantahay in Kmail uu u shaqeeyo sida soo jiidashada adiga, shaqada waxaan si xoogan ugu adeegsadaa boostada,
Ma ku haysan karaa emayllada tabsyada hawsha ii fududeynaya?
Waxaan isticmaalaa (oo leh GNOME 3 Fallback weli):
-Iceweasel (oo laga soo xigtay wargeysyada gadaal laga sii daayo)
-Naxariis (wada hadalka wajiga)
-GIMP (si loo saxo hal sawir ama mid kale).
Waqtigaan la joogo, hadda ma isticmaalo macmiil emayl, laakiin waxaan isticmaali doonaa Icedove ESR illaa iyo inta aan ka haysto emayl martigelinta aan haysto.
Waa mid aad u fudud:
Si aad ugu dhex wareegto waddankayga, inta badan waa inaad marto server-ka wakiilka ah ee xukuma inta badan dekeddaha barnaamijyada. Marka kaliya waxaan baari karaa dekedda 80 iyo 3128 (oo ay adeegsadaan Squid)… Ka waran codsiyada KDE? Kopete ma maamusho isticmaalka wakiilka shaqsi ahaan koonto kasta oo aan isticmaalno. KDE-Telepathy haa, laakiin uma shaqeyso sidii la rabay, waxay leedahay cayayaanka .. sidaa darteed, kan kaliya ee fuliya (waligiisna fuliya) howshani waxay ahayd Pidgin, aniga ahaan, Macaamiisha ugu fiican ee GNU / Linux Fariin.
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabta Elav, waan fahmay.
Laakiin maxay wax badan u tahay haddii rakibidda Libnotify ay horeyba u jirtay?
Shay kale. Waxay umuuqataa mid qosol badan sida taarikhiga ah ay umuuqato inay qorsheynayaan fariinta si ay usameeyaan shaashadda hahaha
Waxaan tijaabinayaa haddii finch ay sidoo kale shaqeyso.
Ku soo jawaab Santiago Córdoba
Markii aan isku dayo inaan soo dejiyo faylka waxay ii soo dirtaa guriga mana soo degsato wax.
Waxaan isku dayay inaan soo dejiyo baakada, laakiin waxay sheegaysaa inaysan jirin, waxaa jira meel kale oo lagala soo bixi karo oo aan ka ahayn koodhka Google
Jawaab Rayco García